China Uhlobo oluphezulu fracturing Breaker LBS68 mveliso kunye nabenzi | Shengda
Uhlobo oluphezulu lweHydraulic Breaker LBS100
Uhlobo Cwaka Hydraulic Breaker LBS140
Uhlobo oluthe cwaka lweHydraulic Breaker LBS100
Icala lohlobo lweHydraulic Breaker LBS195
Icala lohlobo lweHydraulic Breaker LBS185
Icala lohlobo lweHydraulic Breaker LBS135
Uhlobo olusecaleni lweHydraulic Breaker1 LBS75
Uhlobo oluphezulu lweHydraulic Breaker LBS68
Uhlobo oluthe cwaka lweHydraulic Breaker LBS85
Icala lohlobo lweHydraulic Breaker LBS45
Ulawulo olulula kunye nokuma ngokulula kwenza kube lula ngakumbi kwisicoci
Ngaphandle kobunzima becala, ukunciphisa ukuthambeka kokonakala kwesisel
Ubude obude kunye nobunzima obupheleleyo
Uhlobo oluphezulu lwe-LBS lwe-hydraulic breaker inesitrayikhi esinamandla ngakumbi, izixhobo zonke ziyilo oluphambili, isakhiwo esilula, ezimbalwa
Uhlobo oluphezulu lweHydraulic Breaker
• Ulawulo olulula kunye nokuma ngokulula kwenza ukuba kube lula ngakumbi kwisicoci
• Ngaphandle kobunzima becala, ukunciphisa izinga lokophuka kweselesi
• Ubude obude nobunzima obupheleleyo bebonke
Uhlobo oluphezulu lwe-LBS lwe-hydraulic breaker inesitrayikhi esinamandla ngakumbi, izixhobo zonke ziyile phambili, kuyilo olulula, izinto ezimbalwa kunye nolondolozo olulula.
Ukujonga phambili-ukujonga ngokwakho uphando kwiindawo ezininzi zokungcebeleka.
2.Ukuba unemveliso ephambili kunye nezixhobo zokuhlola, ixesha elifutshane lokuhambisa
Inkqubo yokujonga esemgangathweni ye-3, ukuvavanya imveliso nganye ngaphambi kokuthunyelwa
Inkqubo yolawulo olupheleleyo lwe-4, i-ISO9001: 2015
5.Product ukuhlangabezana nemigangatho yaseYurophu, kunye nesatifikethi CE.
6.Ixesha lewaranti ngunyaka omnye. Siyathembisa kwimpendulo yeyure kunye neyure engamashumi amabini anesine ukusombulula. Ukuba kuyimfuneko, sithumela abasebenzi bezobugcisa ukusombulula ingxaki.
Izinto eziluncedo Product:
1.Sikhetha ezona zixhobo zibalaseleyo: 40CrNiMo, 20CrMo, 42CrMo
2.Leading technology ubushushu unyango. Sineeworkshop yethu yokunyanga ubushushu kunye neminyaka eli-10 yokunyanga ubushushu
Sineenjineli zenqanaba lokuqala, kwaye uninzi lwabasebenzi bethu banamava angaphezu kweminyaka emi-5
I-Huaian Shengda Machinery yasekwa ngo-2009, inkampani yethu igubungela indawo engama-30000. Sisebenza kakhulu kwi-R & D, ukuvelisa kunye nokuthengisa ii-hydraulic breakers. Ngamava ethu amaninzi kunye nabasebenzi abakhutheleyo nabasebenza nzima, sinokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo ezivela kwiintlobo ezahlukeneyo zabathengi. Sibhalise igama lethu "LBS". Imveliso yeLBS Brand inezibonelelo zolondolozo olusezantsi, ubomi obude bokusebenza, kunye neempawu ezintsha. Kule minyaka iliqela idlulileyo, inkampani yethu iyaqhubeka ukulinganisa umthengisi onokuthenjwa okumgangatho ophezulu ngu-SANY, i-XCMG kunye nezinye iinkampani ezaziwayo ezaziwayo.
Ukupakisha kunye nokuthumela
Ukupakisha:Iphakheji esemgangathweni yokuthumela kwelinye ilizwe.Iyunithi enye engxoweni yokugcina ezincamathelayo, emva koko kwibhokisi yeenkuni ezininzi. Iphakheji nganye ibandakanya ezi zinto zilandelayo: iiselles ezimbini, iithumbu ezimbini, iseti enye yeN2 Ibhotile kunye noxinzelelo lwegeyiji, iseti enye yekhithi yokutywina, enye yezixhobo kunye nezixhobo zokusebenza eziyimfuneko kunye nencwadana yokusebenza.
Imigodi -------- Imigodi, Ukwaphula ixesha lesibini
Ukunyibilikisa isinyithi ------- Ukucoca i-slag, Ukudilizwa kwesithando somlilo kunye nesiseko
Indlela --------- Ukulungisa, ukuPhula, umsebenzi weSiseko
Uloliwe ---------- Tunneling, Ukudilizwa kwebhulorho
Ulwakhiwo ---- Ukudilizwa kwesakhiwo kunye nesamente eqinisiweyo
Ukulungiswa kweenqanawa-Ukucoca i-clam kunye ne-rust kwi-hull
Abanye ----------- Ukophula udaka olunqabileyo
Indawo yokuQala I-Jiangsu, China (Mainland)
Igama lebrand IiLBS
Inombolo yomzekelo LBS68
Chwetheza Uhlobo oluphezulu lwe-Hydraulic Breakers
Umbala Mthubi okanye iMfuno yoMthengi
Ukusetyenziswa Imigodi, Quarry, kunye noKwakha
Ubukhulu besixhobo 68 mm
IPiston ingxubevange intsimbi ezikumgangatho ophezulu
Uxinzelelo lweoyile olusebenzayo
Ukuhamba kweoyile okufunekayo
Impembelelo yokuhamba rhoqo
I-0.15 ~ 0.25
Ukupakisha:Ukukhuphela iphakheji esemgangathweni.Iyunithi enye ibhegi yokugcina izinto, emva koko kwibhokisi yeenkuni ezininzi. Iphakheji nganye ibandakanya ukulandela okulandelayo: ii-chisel ezimbini, iithumbu ezimbini, iseti enye yebhotile ye-N2 kunye negeyiji yoxinzelelo, iseti enye yekiti yokutywina, ibhokisi yezixhobo enye enezixhobo eziyimfuneko zokugcina kunye nencwadana yokusebenza.
A: Ewe, umzi-mveliso wethu wasekwa ngo-2009.
Q: Uqinisekile ukuba imveliso yakho iyakulingana nesikhuseli sam?
A: Izixhobo zethu zilungele uninzi lwezinto zokumba. Sibonise imodeli yakho yesave, siya kuqinisekisa isisombululo.
Q: Ngaba uvelise ngokoyilo lwabathengi?
A: Ngokuqinisekileyo, inkonzo ye-OEM / ODM iyafumaneka. Singumenzi wobugcisa.
A: Iintsuku zomsebenzi ezi-5-25 emva kwentlawulo.
Q: Kuthekani ngepakeji?
A: Izixhobo zethu ezisongelwe yifilimu eyoluliweyo, ipakishwe yipallet okanye yipolishi yetyala okanye njengoko kuceliwe.
Egqithileyo Uhlobo oluthe cwaka lweHydraulic Breaker LBS85
Okulandelayo: Uhlobo olusecaleni lweHydraulic Breaker1 LBS75
Ngesanti kubunzulu baphantsi yesando Hammer ukuthengiswa
Ngesanti kubunzulu baphantsi Breaker Jack Hammer
Ngesanti kubunzulu baphantsi Breaker Machine
Hydraulic Breaker Yiba nenceba